5 Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Fiirsato Kahor Intaadan Bilaabin Websaydhkaaga Ecommerce | Martech Zone
Miyaad ka fikireysaa furitaanka degel internet? Waa kuwan shan shay oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso ka hor intaadan bilaabin boggaaga e-commerce:
1. Xaq U Leh Products
Helitaanka sheyga saxda ah waayo ganacsiga e-commerce waa ka sahlan yahay in la yiraahdo intii la qabtay. Adoo u maleynaya inaad yareysey qaybta dhagaystayaasha, aad rabto inaad wax ka iibiso, su'aasha xigta ee waxa la iibinayo ayaa soo baxaysa. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad iska hubiso marka aad go'aan ka gaareyso wax soo saar. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in badeecada aad dooratay inaad iibiso ay tahay mid loo baahan yahay. Fahmaan inaad damacsan tahay inaad ganacsi sameysid oo aad lacag sameysato.
Tijaabinta wax soo saar cusub ama soo bandhigid ma aha oo kaliya shaqo iyo waqti qaadasho, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid qaali ah sidoo kale. Halkii aad isku dayi lahayd wax cusub, raadi shey baahi loo qabo oo ku jira meel aad u yar oo tartan ah. Sameynta shaqadan gurigu waxay umuuqan kartaa shaqo, laakiin waxay bixin doontaa faa iidooyinka hadhow marka websaydhkaaga e-commerce uu bislaado.
2. Hayso Shirkado Badan Iyo Maraakiib
Markaad dhammeysato badeecada aad iibinayso, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaatid halka laga soo iibinayo. Ilaa aad alaabtaada ka dhigeyso 100% kaligaa, iyadoon wax alaab-qeybiyeyaal ah ku lug laheyn, markaa waad ka boodi kartaa tallaabadan. Qof kasta oo kale, waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah waxsoosaarka adduunka waxaa laga sameynayaa Aasiya. Ku soo bixida dalalkan meel u eg Mareykanka ayaa qaadan doonta waqti. Kaliya maahan inay waqti qaadato, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa dhibaato maadaama aad ujirto kumanaan mayl shirkadahaaga. Xaaladahan, waa inaad ka heshaa soosaarayaasha aad u tagto xilliyada dhibaatada ama hubanti la'aan.
Fikrad ahaan, waa inaad ku haysataa meel u dhexeysa saddex illaa afar soo-saare hal shey. Waa inaad la jaanqaaddaa iyaga oo u digtoonaataa haddii aad filayso kororka iibka ama wax kale. Markaad dhamayso helitaanka soo saaraha, waxaad u baahan doontaa inaad ka walwasho rarka alaabtaada. Waxaa jira fursado dhowr ah oo la heli karo, waxaana ugu fiican inaad sameyso dadaalkaaga saxda ah ka hor intaadan go'aansan inaad mid raacdo.
3. Ku-hagaaji goobtaada E-commerce Beddelka
Aynu u galno dhinaca hal abuurka badan ee socodsiinta ganacsiga ecommerce. Si aad ganacsigaaga ugu guuleysato, waxaad u baahan doontaa inaad wax sameyso. Sameynta iibintu aad ayey uga dhib yar tahay markii websaydhkaagu u qaabeeysan yahay si aan macquul ahayn oo uu u shaqeeyo sidii loogu talo galay isticmaalaha.
Kireystayaasha naqshadeeyayaasha iyo horumariyeyaasha khibrad u leh sameynta degellada natiijooyinka ku shaqeeya haddii aadan kalsooni ku qabin inaad iskaa u dhisato goobta. Waxay kugula talin karaan aaladaha sida sheekooyinka, barnaamijka sheekeysiga tooska ah, ama soo-baxayaasha kaa caawin kara kordhinta iibka. Intaa waxaa sii dheer, hubi in websaydhku ka madax banaan yahay cilladaha muhiimka ah ee laga yaabo inay caqabad ku noqdaan macaamiishaada iman kara markay marayaan macaamil ganacsi.
4. Maalgashi Suuqgeyn Wax Ku ool ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad leedahay websaydhkaaga e-commerce oo socda oo socda, laakiin weli lacag ma helaysid. Si aad u bilawdo inaad keento xoogaa lacag socod ah, waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo maalgalinta wadiiqooyinka suuqgeynta saxda ah. Waxaa jira fursado dhowr ah oo aad kala dooran karto. Haddii aad raadineyso dib-u-celin deg deg ah, waxaad ku raaci kartaa xayeysiisyada warbaahinta bulshada, xayeysiisyada mashiinka raadinta, suuq-geynta saamaynta, si aad u magacawdo waxyar.
Dadka badankood, waa inaad kubilaabtaa seddexdan qaab oo aad aragtaa waxa kuu badalaya adiga. Kadib, markaad bilowdo lacag sameynta oo aad kujirto boos aad ku tijaabiso, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fiiriso xeeladaha suuq-geynta muddada-dheer sida mashiinka raadinta (SEO), suuq geynta waxyaabaha, xayeysiinta, iwm.
5. Samee Siyaasado Cad Waqtiga Hore
Lahaanshaha siyaasado cad ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo in boggaga internetka e-meheradahaaga hawl maalmeedkiisu ay u socdaan si dhib la'aan ah. Nidaamyadan waxaa ka mid ah siyaasadda asturnaanta boggaaga, siyaasadda soo celinta, u hoggaansamida HIPAA haddii aad u-qalanto, iwm.
Waxaa fiican inaad la xiriirto qof aqoon u leh arrimahan. In kasta oo fursadaha aad ku geli karto dhibaato ay tahay inay yaraato, ka dhig iyaga eber adoo haysta siyaasado cad oo la taaban karo oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo adiga iyo ganacsigaaga.
Tixraac ahaan, waxaad u mari kartaa siyaasadaha lagu soo bandhigo qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo shirkadaha kale ee hormuudka ka ah tartammadaada.
Ku saabsan SwiftChat
SwiftChat ayaa kaa caawin kara inaad si dhakhso leh u aqoonsato booqdayaasha ku habboon wada sheekaysiga tooska ah oo aad ugu jihaysid inaad wax iibsato. Ku -sheekaysiga tooska ah ee e -commerce wuxuu 400% ka jaban yahay taageerada taleefanka, wuxuu kordhin karaa beddelaadda 3 illaa 5 jeer, wuxuu yareyn karaa heerka ka -tegista gaadhiga, wuxuu kordhin karaa qanacsanaanta macaamilka, wuxuu kordhin karaa daacadnimada macmiilka, wuxuuna hagaajin karaa wax -soo -saarka shaqaalahaaga taageerada.
Soo ogow SwiftChat
Tags: chatheerka sare u-rogiddafadhisiyaasadaha haynta xogtaecommerce ku sheekeysigabilaabida ecommercesuuq geynta ecommerceMaraakiibta ecommercealaab-qeybiyeyaasha ecommerceDaahfurkawada sheekeysi toos ahQaanuunka Arrimaha Khaaska ahisku darka alaabtaxulashada alaabtaalaab-qeybiyeyaashasoo celinta siyaasadahamaraakiibta
7 Isbeddellada Suuqgeynta Saameynta ee La Filayo 2021
Jun 24, 2021 saacadu markay ahayd 4:57 AM
Suuqgeynta ecommerce warbaahinta bulshada waa aalad aad u awood badan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad kula xiriirto warshadahaaga, macaamiishaada, iyo suuqaaga shaqsi ahaan, qaab dadweyne. Waad ka faa'iideysan kartaa warbaahinta bulshada si aad u abuurto ka-qaybgal & is-dhexgal, kor ugu qaadista taraafikada boggaaga, iyo inaad horumariso saldhig ballaaran oo macaamiisha ah. Joogtaynta midab adag & shakhsiyan shirkaddaada iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay iswaafajinta ayaa ah waxa ka dhex abuuri doona kalsooni dhagaystayaashaada.